November 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha November 30, 2019
(Spain) 30 Nof 2019. Kooxda Barcelona ayaa isku diyaarineysa kulanka ay habeen dambe ku booqan doonto Atlético Madrid garoonka Wanda Metropolitano, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada 15-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa xaqiijiyay in Lionel Messi uu xaq u leeyahay inuu ku guuleysto […]Sii akhriso
Soomaaliya November 30, 2019
Baardheere-(SONNA)-Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa Maanta Lix xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxa ay ku dileen agagaarka Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo. Mohamed Ali Abdullahi, oo ah Taliyaha Ciidanka xoogga Dalka ee Baardheere ayaa saxafadda u sheegay in ay iyagu weerar ku qaadeen halka ay ku sugnaayeen Al-Shabaab markii ay xog ka heleen Dadka degaanka. […]Sii akhriso
(Madrid) 30 Nof 2019. Macalinka Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa wuxuu shaaca ka qaaday, sababta ka dambeysay guushii ay maanta ka gaareen kooxda Deportivo Alavés. Real Madrid ayaa saddexda dhibcood kaga soo qaadatay kooxda Deportivo Alaves oo ay marti ugu noqotay Estadio de Mendizorroza, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, kulan ka tirsanaa horyaalka […]Sii akhriso
Soomaaliya oo ka qeyb gashay shirka caddaaladda Adduunka-(Sawirro)
Rome-(SONNA)-Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda XFS, Avv; Xasan Xuseen Xaaji, ayaa ka qeyb galay shir caalami ah oo ka dhacay Dalka Talyaaniga, kaasi oo looga hadlaayey arrimaha Caddaaladda iyo Garsoorka, gaar ahaan ka hortagga faldanbiyeedka ka abuurma naceybka oo keeni karo xasuuq iyo dilalka wadarta ah. Shirka ayaa waxaa kaloo looga hadlay faldanbiyeedka iyo ciqaabaha ka Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa dalka Talyaaniga ka qeyb ggalay shir caalami ah oo halkaasi ka dhacay. Shirkan ayaa looga hadlayay Arrimaha Cadaaladda iyo Garsoorka gaar ahaan ka hortaga faldanbiyeedka ka abuurma naceybka, kaas oo keeni karo xasuuq iyo dilalka wadarta ah. Sidoo kale, shirkan Sii akhriso
(England) 30 Nof 2019. Liverpool ayaa guul muhiim ah kaga gaartay garoonkeeda Anfield, kooxda Brighton & Hove Albion, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Liverpool. Daqiiqadii 18-aad ee dheesha […]Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyeha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa dhagax-dhigay Xarunta Gaadiidka iyo Dhul-bixinta Dowladda Hoose ee Xamar oo dib loo dhisayo. Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in muddo 30 sano ah kaddib dib loo dhisayo Xaruntan, iyadoo sanadihii la soo dhaafay ay xarummo ku mel gaar ah ku shaqeynaayeen Laanta Sii akhriso
(England) 30 Nof 2019. Newcastle United oo taako u dhigtay kooxda Manchester City oo marti ugu aheyd garoonka St James’ Park, kaddib markii ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbaro 1-1 ah. Daqiiqadii Manchester City ayaa hogaanka u […]Sii akhriso
Shir aan caadi ahayn uu maanta XDS uga furmey maanta Jig jiga.
DDS November 30, 2019
Shir-weynihii 1aad ee aan caadiga ahayn, ee Xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida, XDS, ayaa si rasmi ah uga furmay madasha shirarka, ee Kaali 1 ee madaxtooyada Deegaanka Soomaalida. Shir-weynahan oo uu furay gudoomiyaha XDS, Axmada Shide Maxamad, ayaa laga doodidoona go’amadii ay Golayaasha,(Gudiga fulinta iyo Golaha-dhexe) ee XDS, ku go’amiyeen in lagu biiro Xisbiga Barwaaqo, Sii akhriso
(London) 30 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Chelsea Iyo West Ham United kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Chelsea Iyo West Ham United: Chelsea XI: West Ham XI: Gool FM.Sii akhriso